Ahitana mponina miisa 330 000 ao Andapa izay mielipatrana amin’ireo kaominina 21
ka ao anatin’izany ireo mpiasa mpikarama izay ahian’ny CNaPS ny fiahiana ara-tsosialiny. Tsy maintsy soratana CNaPS ary hatao ara-dalàna ny fifanekena arak’asa ary soritana ao anatin’izany ny asa iandraiketana, ny sokajy misy azy ary ny karama. Adidin’ny
mpampiasa miaraka amin’ny fanefana ny latsakemboka izay 13% ho an’ny mpampiasa ary 1% ho an’ny mpiasa raha sehatr’asa ankapobeny. Raha sehatry ny fampianarana kosa dia
8% ny an’ny mpampiasa ary 1% ny an’ny mpiasa. Vontoatin’ny fampianarana notanterahin’ny teknisian’ny CNaPS Andapa ireo. Ankoatra izay dia nampahafantarina ny mpiofana ihany koa ireo karazana tolotra ahitana ny fanampiana ny fianakaviana, ny
fandraisana an-tànana raha tra-doza na marary vokatry ny asa ary ny fisotron-dronono rahatrizay tonga ny fahanterana. Tsy tongatonga ho azy ireo zo ireo fa mila adidy, ny mpampiasa mila manefa sy mandrotsaka ny vola latsakemboka any amin’ny CNaPS fa ny mpiasa koa mila mitaky sy manara-maso ny zony ary mikarakara ireo antontan-taratasy ilaina amin’ny fangatahana fanampiana. Angatahina avokoa mantsy ny fanampiana rehetra ao amin’ny CNaPS. Tsy maintsy angatahina amin’ny alalan’ireo antontan-taratasy fenoina izany na dia efa mpikambana sy mandoa latsakemboka tsy tapaka azy ny mpampiasa sy ilay mpiasa. Efa misy ny taratasy fenoina izay alaina maimaimpoana eny anivon’ny biraon’ny CNaPS, miampy ireo taratasy fitazomana ny zo izay karakarain’ny mpiasa sy ny vady aman-janany toy ny fanamarinana ny maha mpianatra (certificat de scolarité) izay mila aterina any amin’ny CNaPS mba hahazoana ny volan-jaza, ny fanamarinana fahavelomana (certificat de vie) ho an’ny mpandray fisotroan-dronono hahafantarana fa mbola velona ilay zokiolona mandray ny fanampiana, sy ny maro hafa.